'मलाई के यस्तो बिपत आई लाग्यो नि सरकार….!' : थामिएन शाहीको आँखाको आँशु ! (भिडियो) | ebaglung.com
२०७५ श्रावण ३१, बिहीबार १४:१७	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार, विविध
योगेन्द्र विश्वकर्मा, बुर्तिवाङ २०७५ साउन ३१ । साउन ३० गतेको बिहान साढे ५देखी ६ बजेको समयमा घर माथीको ढिस्को खसेर निसीखोला गाउपालिका ३ का मानबहादुर शाहीको घर र बंगला पु-यो । घरमा रहेका मानबहादुर शाहीकी श्रीमती दिलकुमारी शाही र बुहारी डल्ली शाहीको घर भत्किदा पुरिएर मृत्यु भयो । बुहारीको काखमा रहेका ३ वर्षका बालक बिनोद शाहीको भने जीवितै उद्दार गरियो । सासू बुहारीको पहिरोमा पुरिएर मृत्यु हुनु तर आमाको काखमा सुतिरहेको ३ बर्षिय बालक जीवित भेटिनु कुनै चमत्कार भन्दा कम छैन भन्ने अहिले घरघरमा चर्चा चलिरहेको छ ।
घरमाथीको ढिस्को खसेको थाहा पाएर आमाले नै छोरालाई घर बाहिर ल्याएर राखेर आफु केहि सामान लिन घरमा पसेको मौकामा घर पुरै भत्किदा पुरिएको हुन सक्ने अनुमान गर्नेहरु छन् । होईन, घरको दलिनको मुनी बालक परेर बचेको भन्नेहरु पनि छन् । जे होस, बालक बाँच्न सफल भयो, दैवले हात थापे भनेर सन्तोष गर्नेहरुपनि गाउँमा छन् ।
तीन वर्षिय बालक विनोद शाही ।
अहिले ३ वर्षको अवोध बालकलाई हजुर आमा र आमा अब यो संसारमा छैनन भन्ने थाहा छैन । उस्का आँखाले .एकोहोरो आमा खोई भनि खोजी रहेको छ । कुन बेला आउलिन भनेर एकटक लगाएर आमालाई पर्खिरहेको छ । बिनोदले आफु खेल्ने घरको पेटी र आगनमा ठुला ठुला ढुंगाहरुको थुप्रो देखेर अकमक्क छ । हजुर बाबाको काखमा बसेर उसले आमालाई खोई भनी सोधिरहेको छ ।
बुढेसकालकी सहारा बुढी, घरको हेरचाह गर्ने बुहारीलाई गुमाएका मानबहादुरका आँखाबाट आँशुको बलेनिधारा बगेको बग्यै छ । न निद्रा न भोक, चिन्तै चिन्ताले बुढो शरीर सुकिरहेको छ ।
अस्ति मंगलबार मात्रै गोठमा खर्चपर्च लगेर छोडेर आएकी श्रीमती घरमा पुरिएर मृत्यु भएको अवस्थामा शव देख्दा भावविह्वल बनेका मानबहादुरले उद्दारका लागी घटनास्थल पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेद प्रसाद खरेललाई समात्दै, “मलाई के यस्तो बिपत आई लाग्यो नि सरकार….!” भनेर ड्वाँड्वाँ रुँदाको क्षण उपस्थित सबैका आँखा रसाएका थिए । उनको त्यो मार्मिक अभिव्यक्ति सुनेर पीडाबोध गरिहेका प्रजिअ खरेल भन्छन्, सरकारले हेरचाह गर्छ, न आत्तिनुस भनी सान्त्वना दिने प्रयास गर्दा मैलेपनि मन थाम्न सकिन । मानबहादुरको आँखाबाट बगेको अश्रुधारा अहिले पनि मेरा मानसपटलमा छ । दैवले यस्तो दु:ख कसैलाई नदिउन् ।’
सासू बुहारीबीच सम्वन्ध राम्रो नभएको छिमेकीहरुले बताए । सासू र बुहारी बीच बोलचाल बन्द थियो । उनिहरु एउटै घरमा सँगै सुत्दैन थिए । अलग अलग घरमा सुत्दथे । तर संयोग अलग अलग घरमा सुतेका सासू बुहारीको शव भने दुई घरको बीचमा एकै ठाउमा फेला परेको थियो, उद्धारकर्ताहरु भन्छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खरेल सहितको उद्धार टोली निसीखोला घटनास्थलमा पुग्दा त्यहाँ उपस्थित स्थानीयहरु चकित परेका थिए । दर्जन भन्दा बढी ठाउमा पहिरो गएर मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध भएको बेला घटना स्थलमा प्रहरी उपरीक्षक दीपक रेग्मी, अर्जुनवाण गणका गणपति भुवनराज देवकोटा सहितको टोली देखेर एकै स्वरले भनेका थिए, “यस्तो अवस्थामा यहाँहरु आउनु हुन्छ भन्ने हामीलाई पत्यार लागेको थिएन । यति दु:ख पाएर आउनु भयो हामीहरु खुशी छौँ” एकै स्वरमा गाउपालिका अध्यक्ष लगायत सबै जनप्रतिनिधीहरुले भनेको सुनियो ।
प्रजिअ खरेललाई “यस्तो मध्य वर्षातमा बीसौँ ठाउँमा पहिरोले सडक अवरुद्ध बनेको बेला यति कष्ट सहेर पनि निसी घटनास्थल पुग्नु भयो त ?” भनिरहँदा उनको जवाफ थियो, “जनतालाई परेको आपत विपदमा उद्दार तथा पीडामा मलहम लगाउन, सान्त्वना एवं राहत दिन जानु हाम्रो कर्तव्य हो, हामीले कर्तव्य निर्वाह गरेका हौँ ।”
यस्तो खराब मौसम र क्षत विक्षेत सडकमा दु:ख कष्ट सहेर सदरमुकाम बागलुङ बजार देखी निसीखोला सम्म आउनु हिम्मतको कुरा हो भन्दै स्थानीयले टोलीको प्रशंसा गरिरहेका छन् । प्रजिअ खरेल र टोलीमा सहभागी सदस्यहरुको साहसलाई नमन भन्दै स्थानीयले निकै सराहना गरेका छन् ।
स्मरणीयछ, गत महिना बरेङ गाउपालिकाको धुल्लुबास्कोटमा पहिरोमा परी एकै घरमा श्रीमान श्रीमती र बालिका सहित ३ जनाको मृत्यु हुँदा पनि बलेवा विमानस्थल अवलोकनमा गएका प्रजिअ खरेल त्यतैबाट घटनास्थल धुल्लुबास्कोट पुगेर पीडितहरुलाई राहत प्रदान गरी क्षतीको जायजा लिएर फर्किएका थिए ।